चीन कोण ग्राइंडर, प्रभाव ड्रिल, हथौड़ा, ली-आयन ड्रिल, ऊर्जा उपकरण कारखाना र निर्माताहरू बोडा
हामीले बजारमा देख्ने प्राय जसो पावर उपकरणहरू तल जस्तै छन्:
१. लिथियम ब्याट्री रिचार्जेबल ड्राइभर / रिचार्जेबल ड्राइभर: जुन ड्रिलिंग प्वालको लागि उपयुक्त छ स्क्रू, धातु, सिरामिक र प्लास्टिकको भित्र।
२. रिचार्जेबल इलेक्ट्रिक ड्रिल स्क्रू इन र आउट गर्नका लागि उपयुक्त छ। ड्रिलिंग पनि काठ, धातु, मिट्टी र प्लास्टिकमा गर्न सकिन्छ, वा ईन्ट, क concrete्क्रीट र ढु in्गामा प्रभाव ड्रिलिंग।
Rec. रिचार्जेबल रेन्च निर्दिष्ट आकार दायरा भित्र र बाहिर पेंच गर्नका लागि लागू हुन्छ, र निर्दिष्ट आकार दायरा भित्रका गाँठो कस्न र ढिलो गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
Rec. रिचार्जेबल इलेक्ट्रिक हथौड़ा ईंट, क concrete्क्रीट र ढु on्गामा प्रभाव ड्रिलिंगका लागि उपयुक्त छ। तपाईं काठ, धातु, सिरामिक र प्लास्टिकमा प्वालहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। इलेक्ट्रोनिक वेग नियन्त्रण र अगाडि / रिभर्स प्रकार्यहरू सहितको मेसिनले स्क्रूहरू कडा र ट्याप गर्न सक्दछ। एक प्रकारको
Electric. इलेक्ट्रिक ह्यान्ड ड्रिल प्लास्टिक, सिरेमिक, धातु र काठमा ड्रिलिंगका लागि उपयुक्त छ। इलेक्ट्रिक समायोजन र अगाडि / रिभर्स प्रकार्यहरू सहितको मेसिनहरू पनि घुमाउन र थ्रेड ड्रिल गर्न सक्दछ। एक प्रकारको
Imp. प्रभाव ड्रिल ईंट, कंक्रीट र ढु on्गामा प्रभाव ड्रिलिंग को लागी उपयुक्त छ। यसले काठ, धातु, सिरामिक्स र प्लास्टिकमा प्वालहरू पनि गर्न सक्छ। मोडेल इलेक्ट्रोनिक वेग नियन्त्रण उपकरण र अगाडि / रिभर्स प्रकार्य संग सुसज्जित पछाडाहरु पछाड / कस र कम गर्न सक्छन्। एक प्रकारको
Ham. हथौडा ड्रिल काँक्रीट, ईट्टाको पर्खाल र ढु on्गामा कम्पन ड्रिलिंगका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्पन ड्रिल बन्द भएपछि, मेशिनलाई काठ, धातु, सिरेमिक सामग्री र प्लास्टिकमा प्वाल पार्ने प्वालहरू बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ। इलेक्ट्रोनिक वेग नियन्त्रण उपकरण र सकरात्मक / नकारात्मक ईंट स्विचको साथ मिसिएको मेसिन / आउट स्क्रू वा ड्रिल थ्रेडहरूमा सकर्न सक्छ। मेसिनले काट्ने प्रकार्यले छेस्ने कार्य गर्न सक्छ। एक प्रकारको
The. बिजुली उठाउने ठाउँ क concrete्क्रीट, ईट्टाको पर्खाल, ढु stone्गा र डामरमा छेस्कोको लागि उपयुक्त छ। यदि उपयुक्त सामान स्थापना गरिएको छ भने, मेशिन स्क्रूमा ट्याप गर्न वा लुगाहरू मिसाउन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक प्रकारको
Ang। कोण चक्की काटी, ग्राइन्डिंग र ब्रश पिसाई धातु र ढु stone्गाको लागि उपयुक्त छ। अपरेशनको क्रममा पानी प्रयोग गर्न मिल्दैन, र ढु plate्गा काट्दा गाईड प्लेट प्रयोग गर्नुपर्दछ। इलेक्ट्रोनिक नियन्त्रणको साथ सुसज्जित मोडेलहरूको लागि। यदि उपयुक्त मेशिनहरूमा यथोचित सामानहरू स्थापना भएमा पीस र पलि pol्ग पनि गर्न सकिन्छ। एक प्रकारको
१०। धुल्ने मेसिन धातु र ढु stone्गाका लागि उपयुक्त छ। एक प्रकारको
११. सिधा ग्राइन्डर (एमरी व्हील स्थापना भएको) धातुलाई पिसाउन र बुर हटाउनका लागि उपयुक्त छ। इलेक्ट्रोनिक स्पीड कन्ट्रोल उपकरणसहित मेसिनले ब्रश, फ्यान-आकारको ग्राइन्डिंग व्हील र पीस बेल्ट पनि कम स्पीडमा स्थापना गर्न सक्दछ। एक प्रकारको
१२. इलेक्ट्रिक ड्राइभर / बाहिर स्क्रू घुमाउन र काठ, धातु, सिरेमिक र प्लास्टिकमा ड्रिलिंग प्वालको लागि उपयुक्त छ। एक प्रकारको
१.. ट्यापिंग मेशिन सीधा प्वालमा ट्याप गर्नको लागि उपयुक्त छ। विशेष सामान स्थापना पछि, अन्धा ट्यापिंग गर्न सकिन्छ। १.. प्रभाव रेन्च निर्दिष्ट आकार दायरा भित्र स्क्रू भित्र / बाहिर घुमाउनको लागि उपयुक्त छ, र निर्दिष्ट आकार दायरा भित्र पागल कडा / ढीला गर्न सक्दछ। एक प्रकारको
१.. धातु इलेक्ट्रिक कतराहरू फलामको पाना काट्नका लागि उपयुक्त छन्, र चिप्स उत्पादन गर्दैन। तपाईं घटता र सीधा रेखा काट्न सक्नुहुन्छ। एक प्रकारको
१.. सिधा इलेक्ट्रिक शीयर / इलेक्ट्रिक पंचिंग शियर धातु प्लेट काट्नको लागि उपयुक्त छ, र धातु प्लेट काट्ने पछि मोर्ने र विकृत हुँदैन। यो सीधा रेखा काट्ने, भित्री प्वाल काटने र साँघुरो झुकने कोण काट्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक प्रकारको
१.. विकर्ण आरा अनुदैर्ध्य सिधा काटने र ट्रान्सभर्स सीधा काट्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक प्रकारको
१ cutting. प्रोफाइल काट्ने मेसिनले धातुको प्लेटलाई ठाडो र तेर्सो रूपमा पानी बिना नै काट्न सक्छ। एक प्रकारको
१।। स्टोन काट्ने मेसिन उच्च खनिज पदार्थ (जस्तै मार्बलको रूपमा) काट्ने वा काट्नका लागि उपयुक्त छ। यो स्थिर workbench मा मेशिन अपरेट गर्न र सुरक्षा कभर प्रयोग गर्न आवश्यक छ। विशेष कन्फिगरेसनको साथ मेशिनहरू पनि भिजेको काट्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। काठ, प्लास्टिक वा धातु काट्न यो मेशिन प्रयोग गर्न अनुमति छैन। एक प्रकारको
२०. भित्ता स्लॉटि machine मेशीन
यो गाइड स्लाइडरले सुसज्जित छ, जुन पानीको उपयोग बिना नै उच्च खनिज सामग्री (जस्तै प्रबलित क concrete्क्रीट, इँटको पर्खाल र डामर फुटपाथ, इत्यादि) को सामग्रीमा खाद्यान्न काट्ने वा पिसाउन उपयुक्त छ।
२१. कर्भिलिनेर काठ, प्लास्टिक, धातु, सिरेमिक बोर्ड र रबरलाई फिक्स्ड अन्डरलेमा काट्नका लागि उपयुक्त छ। यसले सीधा रेखा वा बेभल कोण काट्न सक्दछ (degree 45 डिग्री कोणमा)।
२२. यो एक स्थिर कार्य प्लेटफर्ममा हेर्नका लागि उपयुक्त छ। यो अनुदैर्ध्य र ट्रान्सभर्स सीधा सोरिंग या विकर्ण सोरिंगको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अधिकतम कोण काटने कोणको 45 45 डिग्री हुन्छ। एक प्रकारको
२ L. लेटेक्स काट्ने मेशिनले यस मेशिनलाई फोम प्लास्टिक, फोम रबर र समान सामग्रीहरूमा विभिन्न आकारहरू काट्न प्रयोग गर्न सक्दछ। एक प्रकारको
२ Sand. स्यान्डर / ट्रिमर / योजनाकारहरू काठ, प्लास्टिक, फिलर र चित्रित सतहहरूको सुख्खा ग्राइन्डिंगका लागि उपयुक्त छन्। बिजुली समायोजन समारोह संग मेशिन पनि चमकाने सञ्चालन गर्न सक्छ। एक प्रकारको
२.. तातो हवाको बन्दूकलाई ब be्गाउन वा प्लास्टिकलाई वेल्ड गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, पुरानो पेन्ट र तातो संकुचन योग्य पाइप हटाउन। थप रूपमा, यो वेल्डिंग, टिन प्लेटि,, गोंद पग्लने र पिउने पानी पाइपहरूको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक प्रकारको
२ Wall. वाल डिटेक्टरले धातु, तार, काठ र अन्य सामग्रीहरू पत्ता लगाउन सक्छ। एक प्रकारको
२.. लेजर रेंजफाइन्डरले दूरी, क्षेत्र र मात्रा मापन गर्न सक्दछ, र अप्रत्यक्ष रूपमा उचाई मापन गर्न सक्दछ। एक प्रकारको
२.. लेजर स्तर इन्स्ट्रुमेन्ट यो मापन उपकरण क्षैतिज र ठाडो लाइनहरु मापन गर्न र जाँच गर्नका लागि उपयुक्त छ।
कोण चक्की को उपयोग:
१.विभिन्न ग्राइन्डिंग व्हील विभिन्न धातु पिसाई, काटने र एन्टी-रस्ट्डको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ;
२. ढु stone्गा काट्ने ब्लेड टाइल, ढु stone्गा, सानो काठ र लिबास प्रक्रिया गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ (यो सानो आरा ब्लेडको साथ कोण चक्कीमा काठ काट्नु भन्दा सुरक्षित छ);
मेटल पॉलिशिंग पा्ग्रा र पालि .्ग परिवर्तन गरेर बाहिर निकाल्न सकिन्छ।
१. यो कडा सतह, क concrete्क्रीट र ढु stone्गामा र मल्टि फंक्शनल इलेक्ट्रिक हथौड़ामा ड्रिलिंगमा विशेषज्ञ छ। यो सामान्य इलेक्ट्रिक ड्रिल र इलेक्ट्रिक पिकको सट्टामा प्रयोग गर्न सकिन्छ जब उचित स्थितिमा समायोजित हुन्छ र उपयुक्त ड्रिल बिटसँग सुसज्जित हुन्छ।
इलेक्ट्रिक ड्रिल पिक्याक्स: यो प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने र नष्ट गर्न वस्तुहरूको ठूलो प्रभाव प्रकार्य छ, जसरी तपाईंले काम गर्न हतौडा र छेस्को प्रयोग गर्नुहुन्छ, तर दक्षता म्यानुअल कार्यको भन्दा निश्चित रूपमा धेरै गुणा बढी छ।
२.इलेक्ट्रीक पिक्याक्स र इलेक्ट्रिक हथौला बीचको मुख्य भिन्नता साइजमा भिन्नता हो। उच्च शक्ति संग इलेक्ट्रिक हथौड़ा ठूलो छेद ड्रिल गर्न सक्छन् इलेक्ट्रिक हथौड़ा, जो सिद्धान्त रूप मा समान हो। दुबै ड्रिलमा रोटेसन र हथौड़ाको कार्य छ।
प्रभाव ड्रिल एक साधारण इलेक्ट्रिक ड्रिल को रूप मा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा एक परिवर्तन ओभर स्विच छ, जुन साधारण ड्रिलिंग र प्रभाव ड्रिलिंगमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।
१२ वीको इलेक्ट्रिक ड्रिलको उर्जा २१ वी भन्दा फरक छ। 12V को शक्ति 21V भन्दा सानो छ।
१. इलेक्ट्रिक ड्रिल ब्याट्रीको डिस्चार्ज रेट धेरै तहहरूमा विभाजन गरिएको छ। 12V ड्रिलको पावर 10C मा छ, र पावर सामान्यतया 5C को आसपास हुन्छ।
२. पावर पनि आउटपुट पावरमा निर्भर गर्दछ, किनकि २१ वीको आउटपुट भोल्टेज उच्च छ, यदि हालको पर्याप्त ठूलो छैन भने पनि यो भोल्टेजले पूरक हुन सक्छ, त्यसैले हामी उनीहरूको शक्ति एकै छ कि छैन भनेर मात्र भन्न सक्दैनौं, तर पनि भोल्टेज प्रतिरोध गर्न तिनीहरूको क्षमतामा निर्भर गर्दछ।
BOSENDA शक्ति उपकरण को एक श्रृंखला प्रदान गर्दछ, हाम्रो उर्जा उपकरण ग्राहकहरु EU, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व र दक्षिण पूर्व एशियाई देशहरु बाट छन्।
अधिक शक्ति उपकरण उत्पादनहरूको लागि, हामीसँग सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
अघिल्लो: सुरक्षित, आगो प्रतिरोधी स्टील, फिंगरप्रिन्ट कोड लक, सबै प्रकारका सुरक्षित
अर्को: इलेक्ट्रिकल टेप, दहन समर्थन टेप, पीवीसी टेप, इन्सुलेशन टेप